Hydroxyprogesterone budoate caproate (630-56-8) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Gowrado Dumar ah / Hydroxyprogesterone budada budada
SKU: 630-56-8. Category: Gowrado Dumar ah
AASraw waxaa la socda awoodda wax soo saarka iyo awooda wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka qiyaasta budada Hydroxyprogesterone budada ah (630-56-8), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Hydroxyprogesterone budada budada waa hormoon steroid ah oo la mid ah medroxyprogesterone acetate iyo megestrol acetate. Waa daroogada aasaasiga ah ee 17α-hydroxyprogesterone oo laga sameeyay kiimikada caproic (hexanoic acid). Hydroxyprogesterone caproate waxaa horay looga iibiyey magaca brandka ee MAKENA.
Hydroxyprogesterone kobroate video budada
Hydroxyprogesterone budada budada Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Hydroxyprogesterone budada budada
Dhibcaha Biyaha: 120 ° -124 ° C
Magacyada kiimikada: Hydroxyprogesterone budo furroate
Brand Name: budada Hydroxyprogesterone (OHPC), budada Delalutin, budada Proluton, 630-56-8
Hydroxyprogesterone Isticmaalka budada budada
MACLUUMAAD MACLUUMAAD WAXAA LOOGU YAHAY MACLUUMAADKA MACLUUMAAD KU SAABSAN IYO WAXA LOO ISTICMAALO SIDA LOO ISTICMAALO SIYAABAHA LOOGU TALAGALAYO AMA WAXYAABAHA CAAFIMAAD EE KALE.
1) Dhiig karka uurjiifka ah ee gabdhaha uurka leh ee uurka leh oo leh taariikh ku saabsan dhalashada ilmo-galeenka oo bilawga ah.
Qiyaasta hindhisada (oo keliya hal mar iyo inta badan daawooyinka Makena kaliya)
Dumarka qaangaarka ah ee qaangaarka ah iyo dhalinyarada 16 sano iyo ka weyn
250 mg (1 mL) IM hal mar todobaadkiiba (maalmo kasta 7). Bilow daaweynta markasta inta u dhaxaysa toddobaadka toddobaadka iyo 16 ee uurka ilaa illaa 0 iyo 20 maalmood uurka. Sii wad todobaadkii usbuuc ilaa 6 (illaa toddobaadka toddobaadka, maalmaha 37) ee dhididka ama dhalidda, hadba kii horayba u dhaco. Waxtarka hodanka hydroxyprogesterone wuxuu ku salaysan yahay hagaajinta saamiga dumarka bixiyay wax ka yar todobaadyada 36 ee jadwalka. Ma jiraan wax tijaabo ah oo la kormeero oo muujinaya macaawin toos ah oo daaweyn ah, sida horumarinta dhimashada dhalmada iyo cudurrada. XADGUDUB ISTICMAALKA: Hydroxyprogesterone looma jeedo in lagu isticmaalo dumarka leh jajabyo kala duwan ama waxyaabo kale oo khatar u ah dhalmada ka horeysa.
Qaadashada subcutaneous (Makena auto-injector oo keliya)
XMUMX mg (275 mL) subag ahaan hal mar toddobaadkii (maalmo kasta 1.1). Bilow daaweynta markasta inta u dhaxaysa toddobaadka toddobaadka iyo 7 ee uurka ilaa illaa 16 iyo 0 maalmood uurka. Sii wad todobaadkii usbuuc ilaa 20 (illaa toddobaadka toddobaadka, maalmaha 6) ee dhididka ama dhalidda, hadba kii horayba u dhaco. Waxtarka hodanka hydroxyprogesterone wuxuu ku salaysan yahay hagaajinta saamiga dumarka bixiyay wax ka yar todobaadyada 37 ee jadwalka. Ma jiraan wax tijaabo ah oo la kormeero oo muujinaya macaawin toos ah oo daaweyn ah, sida horumarinta dhimashada dhalmada iyo cudurrada. XADGUDUB ISTICMAALKA: Hydroxyprogesterone looma jeedo in lagu isticmaalo dumarka leh jajabyo kala duwan ama waxyaabo kale oo khatar u ah dhalmada ka horeysa.
2) Daaweynta cudur aan shaqayn karin, soo noqnoqonaysa, iyo kansarka qanjirada ku salaysan.
Dumarka qaangaarka ah
1,000 mg ama ka badan toddobaadkii IM (qiyaasta 1 gram IM markiiba toddobaadkii si xajmiga 1 IM maalinkiiba mar). Jooji marka dib-u-dhac uu dhaco, ama ka dib todobaadyo XNUM oo aan wax jawaab ah ujeedin. Waxaa loo isticmaali karaa marxalado heer sare ah oo la socota daaweyn kale oo daaweyn ah (qalliin, shucaac, ama kiimoteraabiya, ama isku dar ah). Natiijooyinka daaweynta ee la soo gudbiyey ilaa taariikhda waxay ku fiicneyd qaababka taariikh ahaaneed ee kala duwan ee adenocarcinoma endometrial.
3) Daaweynta amenorrhea (koowaad ama labaad) ama dhiig-bax aan caadi aheyn oo dhiig baxa sababtoo ah dheecaan hormoon la'aan ah maqnaanshaha pathology organic.
Dumarka waaweyn iyo dhallinyarada
375 mg mg sida hal qadar ah, la siiyo waqti kasta. Qiyaasta xigta waxay bilaabi kartaa ka dib marka ay 4 maalmood ku dheregto ama, haddii aysan jirin dhiigbax, 21 maalmood ka dib qiyaasta hal mar hore. Haddii aysan wax jawaab ah ka bixin wareega 4, joojin. Tirada wareegyada loo isticmaalo iyo goorta la isticmaalayo qiyaasta isbeddelka ah waxay ku xiran tahay tilmaamaha isticmaalka iyo haddii daaweynta estrogen loo isticmaalo si joogta ah. A wareegsan wareega wareegsan ee estrogen waa sida soo socota (wareegga 28-ku soo noqnoqda, ku celisey toddobaad kasta 4) Maalinta 1 ee wareega kasta: Estradiol Dhiirigalin Diidmo (20 mg mg); kadib, 2 isbuucyo ka dib Maalinta 1: Hydroxyprogesterone budada leh 250 mg IM; markaa Estradiol Valerate (5 mg IM) 4 usbuuc ka dib maalinta 1: Waa maalinta 1 ee wareegga xiga. Ku celi sida la tilmaamay. Haddii la'xaad la'aanta estrogen ee bukaanka qaba amenorrhea, caadada ayaa dhici karta inaysan dhicin illaa ay estrogen la siiyaa dhowr bilood. Jooji marka daaweyn biyeedka aan loo baahneyn.
Si loo baadho wax soo saarka estrogen endogenous ("Medical D iyo C").
250 mg IM markiiba; ku celi si loo xaqiijiyo toddobaadyada XNUM ka dib markii ugu horeeya ee duritaanka. Jooji ka dib qiyaasta labaad. Dhiigbaxu waa inuu dhacaa 4 maalmo 7 ka dib mudista.
Digniinta Hydroxyprogesterone budroate caproate
Hydroxyprogesterone xayiray duritaanka budada, oo ay ku jiraan waxyaalo adag, waxay qancinayaan qeexitaanka baahida caafimaad marka la isticmaalo in lagu yareeyo khatarta dhalmada ka horeysa xubin dumar ah iyo dhammaan shuruudaha soo socda:
1. Xubinta ayaa leh uur qaadid shimbireed hadda.
2. Xubinta waxa ay leedahay dhalashada hore ee dhalashada ee uur-ku-taagii hore oo dhacay intii ay ka yarayd todobaadkii 37 sababtoo ah shaqo-joojin aan caadi aheyn ama dillaacdeedii hore ee xabadka.
3. Xubinimadu ma lahan wax shaqaale ah ama dillaac ah oo ka soo baxaya xagasha inta lagu jiro uurka hadda.
4. Daaweynta waxaa la bilaabaa inta u dhexeysa toddobaadka 16, 0 iyo toddobaadyada 20, maalmaha 6 ee jadwalka.
5. Cirbadaha looma isticmaalo inta badan isbuuciiba illaa illaa 36 usbuucyada dhididka ama wakhtiga dhalashada (hadba midka ugu horreeya) marka ugu horeysa ee wadarta ugu badnaan aan ka badnayn irbadaha 21.
6. Qiyaasta aan ka badnayn maadada 250 ee duritaanka.
Magaca kiimikada ee Hydroxyprogesterone budoate waa budo-4-ene-3,20-dione, 17 [(1oxohexyl) oxy]. Waxay leedahay qaacidaad xooggan oo ah C27H40O4 iyo miisaankeedu yahay 428.60. Hydroxyprogesterone budada ayaa laga helaa caddaan ahaan cadaanyo cadcad oo muuqata ama budo leh xargo kala-bax oo ah 120 ° -124 ° C.
Hydroxyprogesterone Hoos udhigista farsamooyinka ficilka: qaabka uu progesterone ka hortago dhalmada ka horeysa si fiican looma fahmo, laakiin dariiqooyin badan ayaa laga yaabaa inay lug ku yeeshaan .Progesterone wuxuu door muhiim ah ka leeyahay nidaaminta nidaamka dheddig-lab ah ee haweenka waxayna muhiim u tahay in lagu guulaysto guusha embriyaha uurka. Waxay u dhaqmaysaa iyada oo la xakameynayo duubaha progesterone ee ilmo-galeenka, ugxan-yari, naaso iyo habka dhexe ee neerfaha. Receptors Kuwaas waxaa ku jira 2 isoforms, PR-A iyo PR-B. Progesterone waxay ku xiran tahay dadka soo dhaweynta waxay ugu dambeyntii keenaysaa habka loo yaqaan 'transcript of gene transcription.This waxa uu keenaa saameyn ka hortag ah oo joojiya xaaladaha proinflammatory taas oo ku dhacda bilaabista foosha, waxayna ilaalisaa qadarinta ilmo-galeenka iyadoo xasilinaysa progesterone ku kacda myometrium.
Pharmacodynamics ee Hydroxyprogesterone budoate budo: Looma helin daraasado daaweyneed oo gaar ah si loo qiimeeyo Hydroxyprogesterone koobabka budada. Si kastaba ha noqotee, habka ficilku waxay u badan tahay inuu xiriir la leeyahay isdhexgalka sii kordhaya ee ka dhexeeya hormoonada progesterone iyo progesterone.
Hydroxyprogesterone xayawaanka budada ah ee loo yaqaan 'caproate' ayaa ah maalmo 16 (± 6 maalmood).
Hydroxyprogesterone budrka budada ah ee budada ah
Hydroxyprogesterone xayawaanka baayacmushtarka
Sidee loo iibsadaa Hydroxyprogesterone budada budada laga bilaabo AASraw